Isibindi simenze waphila iminyaka engu-23 neHIV | IOL Isolezwe
Isibindi simenze waphila iminyaka engu-23 neHIV
Isolezwe / 1 December 2016, 4:23pm / LUNGI LANGA
UNkk Thula Masondo ophila negciwane lengculazi ngaphambi kosuku lwe World Aids Day.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
UKUXOLELA nokwamukela kwamsiza akwazi ukubhekana nesigameko sokudlwengula esimshiye ekhulelwe futhi enegciwane lengculazi owesifazane (46) waseNewlands East osekhuthaza abanye.
UNkk Thula Masondo, ungumsunguli wenhlangano esiza intsha iTodah Youth-Life Empowerment uphinde abe ngomunye wabasunguli benhlangano iSA Positive Women Ambassadors.
Ngesikhathi ethola ukuthi unegciwane lengculazi ngo-1993 wayekade edlwengulwe wumlisa owayeyisoka lakhe nogcine enguyise wendodakazi yakhe eneminyaka engu-23.
Indodakazi yakhe kwatholakala ukuthi ayinalo igciwane yize ingekho imishanguzo ayithatha ukuvikela lokhu.
Namuhla njengoba kuyiWorld Aids Day uthe lolu suku lumkhumbuza izinto eziningi ngoba lumkhumbuza isibindi abe naso njengoba athola ukuthi unaleli gciwane kunguDisemba 1993 wase ekuveza kunguDisemba ngo-1995.
Ukudlwengulwa kwakhe ngesihluku yilo mlisa owayekade eyisoka lakhe isikhathi esingangonyaka nokuthola ukuthi unegciwane lengculazi, kumenze wazama ukuzibulala izikhathi eziningi kodwa waphila.
Lesi sigameko senzeke esahlala kwa-E eMlazi, ngo-1992 eneminyaka engu-22 ngosuku lwakhe lokuzalwa.
“Ngangikade ngingakaze ngilale nomuntu wesilisa ngesikhathi ngidlwengulwa. Ingane yami ngaqoka ukuyikhulisa ngiyithande yize yayitholakale ngale ndlela.
Ngesikhathi seyinezinyanga eziyisithupha ingane yami ngathola ukuthi nginegciwane lengculazi. Kwaba nzima ukuthi abazali bami bamelane nokukhulelwa kwami kodwa kwaba nzima kakhulu uma sekufanele ngibabikele ukuthi nginanegciwane le ngculazi,” kusho uNkk Masondo.
Uthe ukujoyina ithimba lokweseka abantu abathole ukuthi banegciwane lengculazi, iSinikithemba Support Group, kwamsiza waba nesibindi sokumelana nokuthola ukuthi unegciwane lengculazi.
Ngenxa yobunzima bokubhekana nokutshela abazali bakhe ukuthi unaleli gciwane uze wakuveza lokhu emuva kweminyaka emibili esekuveza odabeni olwaphuma kwelinye lamaphephandaba.
Uthe abazali bakhe nezihlobo zakhe zathola kanjalo ukuthi unegciwane lengculazi.
Uthe kwaba nokungenami kubona okungangokuthi baqale bamnyuka bangamphatha kahle.
Ugcine esakha umjondolo egcekeni esehlala yedwa nengane yakhe.
Lesi simo sibuye sashintsha ngoba abazali bakhe bagcine bemamukele.
Phezu kwalokhu yena noyise wengane yakhe owamdlwengula bakhumelana umlotha ngaphambi kokuthi ashone ngo-2003.
ESinikithemba akatholanga kuphela ithemba lokuqhubeka nempilo nokweseka abantu kodwa yilapho athole khona isoka lakhe eligcine lingumyeni wakhe naseshade naye iminyaka engu-15.
Yena nabanye abesifazane asebeke bahlukunyezwa, abalashelwe umdlavuza, nasebephile isikhathi eside negciwane lengculazi balobe incwadi ekhuluma ngobunzima abadlule kubo nekhuthaza abanye abesifazane iRise Above All.